Facebook ပေါ်မှ လက်တမ်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် … :D | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Facebook ပေါ်မှ လက်တမ်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် … :D
Facebook ပေါ်မှ လက်တမ်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် … :D
Posted by King on Jun 19, 2011 in Creative Writing, Short Story |4comments
facebook နှင့် ကျွန်တော်
ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး မရေးတာကြာလို့ ခေါင်းရှုပ်နေတာလဲပါ တာပေါ့
ဘာရေးရမှန်းမသိတာလည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့ … ငါရေးလိုက်တာ မတော်မတည့်ဆိုရင် အထုခံရမှာလဲ ကြောက်ရသေး
ရွာထဲမှာက လူသစ်တွေများလာတော့ နည်းနည်းတော့ရှိန်တာကလည်းတစ်ကြောင်း … အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း ပေါက်ကရလုပ်ဖို့ကပဲ ခေါင်းထဲ ထွက်လာတော့ ပေါက်ကရပဲ အရင်လုပ်လိုက်တယ်… အော်ပြောရအုန်းမယ်ဗျ
အမှန်အကန်ကတော့ ပြီးမှ နောက်တစ်ခု ဆက်တင်လိုက်အုန်းမယ်…. နှစ်ခုတင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားတာဆိုတော့လေ … ကဲ မပြောမပြီး မတည်မမြည် ဆိုသလို ကဲ ပေါက်ကရ ဇာတ်လမ်း စလိုက်ပါပြီဗျ …. မူရင်းကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ …
ငါ့ညီမသည်သာ အလှဆုံး (မှတ်ချက် မုန့်ဝယ်ကျွေး၇န်အလို့ငှာ)
June 13 at 10:42am ·
Thiri Min Lwin လက်စသက်တော့ ဒီလိုကိုး..မှာလိုက်စမ်း ကြိုက်သလောက်..ရှင်းနိုင်ရင် ပြောပါတယ်..
June 13 at 10:43am ·
Wai Yan ရှင်းနိုင်ပါတယ် …. ကဲရှင်းမယ်ဟေ့ …. ညီမ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်လေ
Thiri Min Lwin ငါမျှားချိတ် ၀ယ်ဖို့ လေသေနတ် သွားကြည့် တာ ပိုက်ဆံအိတ် မပါလို့ ရှင်းလိုက်တော့နော်..ဘိုင်း..
June 13 at 10:51am ·
Wai Yan ဟင် ….. ဟာ ……..
လူကြီးကို မလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ ဘယ်ရမလဲ ကလေးမ လာခဲ့ (မှီရာကို လှမ်းဆွဲလိုက်သည်) တစ်ခုခုတော့ ဆုပ်ကိုင်မိလိုက်သည် …..
June 13 at 10:56am ·
Thiri Min Lwin ကိုင်မိသည့် အရာကေ၇ခဲချောင်းဖြစ်နေသောကြောင့် ချောထွက် သွားပီး သီိရိ တစ်ယောက် ကားပေတတ်ပီး မောင်ထွက်သွားတယ်..ဝေယံခင်ဗျာ..ဘက်စ်ကား အတွက် ပိုက်ဆံ လိုက်တောင်းနေသော ကြောင့် လမ်း စပျောက်သွားတီ..he he :D
June 13 at 11:00am ·
သို့သော် သူ့ရဲ့ညီအမ ၀မ်းကွဲနှင့်တွေ့ပြီး အိမ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်ပို့သောကြောင့် အိမ်ထဲသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ခဲ့ပါသည် … မိသီရိကတော့ မုဆိုးလက်က လွတ်မြောက်လာသည့် သမင်ပျိုလေးပမာ အိမ်သို့ တန်းတန်းမတ်မတ် ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် အိမ်သို့လာခဲ့ရာ နောက်ကျနေခဲ့ပါသည်။ အိမ်တံခါးဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်ရာ ကျွန်တော့်အား မိုးကျရွှေကိုယ်တော်တစ်ဦးအား မြင်လိုက်သကဲ့သို့ ရင်ခုန်သံများ ရပ်တန့်သွားကာ ……………. (ကဲ မင်းအလှည့်)
June 13 at 11:08am ·
Thiri Min Lwin ပြောတတ်တော့ဖူး..ဟီး..
June 13 at 5:06pm ·
Snow Moe Myat ma thiri ka chaw lite tar
June 13 at 8:24pm ·
Thiri Min Lwin ကိုဝေယံ ညီမဆက်ပြောမယ်…ရင်ခုန်သံများရပ်တန့်ပီး ကြောက်စိတ်များနှုင့် ဓါးယူပီါ် အရှိန် နဲ့ ၀ငိထိုးလိုက်ရာ မုဆိုးတစ်ယောက် ပွဲချင်းပီါ် သေဆုံးသွားခြင်း…ဟီး..
June 13 at 9:43pm ·
Wai Yan ကဲ အခန်းဆက် ဆက်လိုက်အုန်းမယ် မုဆိုးတစ်ယောက် ပွဲချင်းပြီး သေသွားခဲ့တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက အတည်မပြုသေးခင်…. အဲဒီအချိန်နဲ့ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဖြူစင်တဲ့သူ့နှလုံးသားက မသေဆုံးပဲ ခုန်နေဆဲပေါ့ …. ဒီအချိန်မှာပဲ မျက်စိလည်လမ်းမှား နာဂစ်တုန်းက လွင့်မျောပြီးအမေရိကမှာ သောင်တင်နေတဲ့ မြားနတ်မောင်လေးက ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားကို မြင်ပြီး ကရုဏာသက်ကာ ဓါးဒဏ်ရာကို ပျောက်ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး လိုရာဆုကိုတောင်းခိုင်းသတဲ့….
Thursday at 2:48pm ·
Wai Yan ကောင်လေးကလဲ သူ့ကိုယ်တိုင်ဆုမတောင်းယူဘဲ သူ့ကို ဓါးနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကို သူ့ကိုယ်စား တောင်းခိုင်းလို့ရမလားဆိုတော့ …
Thursday at 2:50pm ·
Wai Yan မြားနတ်မောင် နတ်သားလေးကလဲ ခွင့်ပြုလိုက်သတဲ့ကွယ် ….. (ကဲ ညီမ အလှည့်ရောက်ပြီ)
Thiri Min Lwin နာရှုံးပီလားဟင်..
Wai Yan သိဘူးလေ ဆက်ဖော အဲ အဲ ဆက်ပြောလေကွာ မပြောနိုင်ရင် ဇာတ်သိမ်းလိုက်တော့မယ် ….
Friday at 8:14am ·
Thiri Min Lwin ဒါဆိုလဲ သိမ်းလိုက်တော့…မတတ်တော့ဖူး…
Wai Yan အင်း ဟုတ်ပြီ ဒီအတိုင်း တန်းလန်းထားခဲ့မယ်
လာဖတ်တဲ့သူတွေ သူတို့ စိတ်ကြိုက် သိမ်းနိုင်အောင်လို့
ကဲ… ဒီဟာကို လာဖတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် သိမ်းကြည့်ကြပေါ့
ကဲ ရွာသူ/သားတို့ ဇာတ်သိမ်းက ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာ ဆက်ရေးပေးကြအုန်းဗျ
အော် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူအောင်လို့ ဇာတ်သိမ်းပေးကြပါဗျ ဟဲ ဟဲ
အားလုံးရဲ့ ဇာတ်သိမ်းပေးမယ့် စာတွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျ …. :D
မြှားနတ်မောင်လေးကို ကြွေးသွားရှင်းခိုင်း လိုက်လေ။
နောက်ဆုံးမှာ တရုတ်ကြီးတယောက်က ဒါးနဲ့ထိုးခံရလို့ တဆတ်ဆတ် ခုန်နေတာတောင် မသေတဲ့အသဲ စားရရင် အလွန်အားရှိမှာပဲဆိုပြီး ဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းရိုက် ခွဲထုတ်ပြီး ကြေးအိုးပြုတ်ထဲ ထည့်စားလိုက်သတဲ့ကွယ်။